Nanakatona ny bilaogin’ilay mpikatroka mpandala ny zon’olombelona i Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2019 3:15 GMT
Nosakanan'ny manampahefana Syriana ny fidirana tao amin'ny bilaogin'ilay mpikatroka mpiaro mpiaro ny zon'olombelona sady bilaogera Mohammad Al-Abdallah, 26 taona izay nibilaogy tao amin'ny Raye7wmishRaj3 (Lasa aho ary tsy hiverina). Afaka niditra tamin'ilay bilaogy voasakana tamin'ny alàlan'ny HTTPS na tamin'ny alàlan'ny fitsidihana ny bilaogy dindo tsotra fotsiny tao amin'ny http://rwmr.wordpress.com/ ireo mpisera Syriana.
Pikantsarin'ny bilaogy voasakana Raye7wmishRaj3 tany Syria (Sary: Raye7wmishRaj3)
Efa nosamborina indroa i Al-Abdallah noho ny tatitra mikasika ny toe-java-misin'ny zon'olombelona ao Syria sy noho ny fanentanana hanafahana ny rainy nogadraina Ali Al-Abdallah , mpikambana ao amin'ny Fanambaràn'i Damaskosy – ary noho ny fananganana ny Komity ho an'ny Fianakavian'ny Gadra Politika tao Syria. Navotsotra tany am-ponja tamin'ny 4 Oktobra 2006 i Mohammad Abdallah sy ny rainy Ali rehefa nahavita sazy an-tranomaizina enim-bolana noho ny “fanakianana ny lalànam-panjakana momba ny hamehana “.
Sarin'ilay Mohammad Al-Abdallah sy ny rainy tao amin'ny fonjan'i Adra , Damaskosy (Sary: Raye7wmishRaj3.)
Ny 18 Martsa 2006, nosamborin'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny sampam-pitsikilovan'ny tafika an'habakabaka ny rahalahin'i Mohammad Al-Abdallah, Omar, noho ny filazam-baovao an-tserasera tao amin'ny bilaogy iraisana Syrian Domari , ary nogadrain'ny manampahefana Syriana dimy taona an-tranomaizina. Nahafantatra ny tenimiafin'ilay tranonkalam-bilaogy Syriana Domari ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny sampam-pitsikilovana Air Force ary namafa izany tanteraka .